Kuchengeta mutero nezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi | ECommerce nhau
Kuchengeta mutero nezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi
Jose Ignacio | | Zvechokwadi uye nhau, StartUps uye vanamuzvinabhizimusi
Iri izano rakanaka rakagadzirirwa kune chero muzvinabhizimusi kana nyanzvi uye, kunyanya, makambani madiki nepakati nepakati ayo, nefomura iyi, anogona kudzikamisa mutoro. yekushandisa kwemakambani aya kubva zvino zvichienda mberi. Uye pane izvo zvatinozopa imwe pfungwa kuitira kuti iwe ugone kuzviita pamwe nekubudirira mune dzino dzakaoma nguva mawakafanirwa kurarama mazuva ano.
Pakutanga, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hapana nzira yemashiripiti yekudzora mashandisiro emitero, asi mashoma "madiki" anogona kushandiswa kunzvenga kubhadhara zvazvino mutero, uye mupfungwa iyi chimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira ndeye mari Investment, iyo inobvumidza kuchinjirwa pakati pavo pasina kushandisa chero mutero unorambidzwa, kuti vozovatengesa kana mutero wezororo watanga pamutero wavo.
Pakupera kwezuva, zvazviri ndezvekuti iwe unokwanisa kuve neyako yese yemubhadharo muchitoro kana online online commerce. Zvekuti munguva dzekutanga iwe unokwanisa tarisana nezvinodiwa zvako zvakakosha kusimudzira iyi yakasarudzika mutsara webhizinesi. Chinhu icho chichava chisiri nyore zvachose, asi nekutsungirira kudiki uye nekuraira iwe unozopedzisira wasvika kune chako chaunoda chinangwa.
1 Kuchengeta mutero pazvikwereti
2 Nemari yekudyara
3 Maitiro ekuvandudza mutero
4 Mutero mukuchengetedza
5 Yakakwira purofiti maakaundi
Kuchengeta mutero pazvikwereti
Kumwe kwekunyunyuta kukuru kwevanochengetedza zvidiki nepakati pamusoro pezvigadzirwa zvekudyara zvavanobhadhara imari yakawandisa yavanofanira kupa kuti vatevedze kurapwa kwavo kwemutero, iko zvino kwakaiswa pa21%, uye izvo zvinoreva kuti pamazana zana euros anowanikwa pane vamwe zvigadzirwa zvavo, Treasure inotora makumi maviri nemaviri euros. Iko hakuna nzira yemashiripiti kurerutsa izvi zvinoshandiswa, izvo zviri pachena zvakakwana, asi kana iwe ukakwanisa kuisa mashoma madiki "madiki" ekudzivirira kubhadhara zvazvino mutero mwero.
Kubva pakuona kwechimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira zvemari kune vanoibata, senge mari yekudyara, zvinogoneka, mune chero zvayakasiyana (yakatemwa mari, inoshanduka, yakavhenganiswa, mari ...), sezvo vachibvumira kuendeswa pakati pasina kushandisa chero kuchengetedzwa kwemari (0%), sekureba sekuchengeta kwavo mari yavo yavakaisa mune imwe homwe kuburikidza nebasa rekuchinjisa. Asi chenjera chaizvo nekumisikidza chero mhando yekutengesa navo (ingave isina kukwana kana yakazara) nekuti mune ino chaiyo kesi vanozoiswa panguva yekupedzisa basa.
Kubva pane ino maonero, zviri nani kugara mumari yekudyara pane kuvhara nzvimbo dzawo (kuvatengese) uye sekunge yaive account yekuchengetedza, kumirira kuti bhalansi yako iwedzere sekufamba kwemazuva. Pane kupokana, iyi nzira inobatsira kwazvo kune vanonyorera haishande kune imwe kuchengetedza uye zvigadzirwa zvekudyara (dhipoziti, zvinyorwa zvebhangi, musika wemasheya, mabvumirano…) Izvo hazvibvumidze iyo yakanangana shanduko kune imwe modhi yechigadzirwa chimwe chete pasina uyu mutero kuiswa kwavari. Pamwe ivo vanotengeswa pamwe nemutero wemitero yavo inoenderana kana, kana vasvika pakukura ndipo pacho mashandiro akaitwa zvepamutemo, uye pasina mukana wekuwana mutero.
Mari idzi dzinobvumira vatengi kutora mukana wekukura mukana unopihwa nemisika yemasheya panguva ino, pasina kuisa njodzi yavo midziyo, vachikwanisa mune dzakawanda zviitiko kuwana kuwongororwazve kuburikidza nesarudzo yakakura yezvigadzirwa zvichibva chero pamusika wemari. uye, mune iwo ari kubuda iwo anomira kunze kwehukasha hwavo.
Dzimwe nzira dzekutsvaga homwe yemhando idzi dzakapamhamha, kubva kune iwo ari mumisika iri kusimukira kuenda kune ayo anovandudza mari yavo mumisika yepasi rose inokarakadza nguva dzese dzakadai seNorth America, European kana Japan, zvine musoro kuenda kuburikidza neve nyika hunhu. Vanogona kunyoreswa kubva ku100 euros, asi chinhu chakakoshesa chekutarisa ndechekuti - sekufanana nekudyara zvakanangana mumusika wemasheya- vane nguva yakatarwa yekusingaperi iyo inogona kukwidziridzwa kusvika pamakore mashanu kana manomwe, iyo iyo inogadzirwa mukirasi yekudyara yakanangana nepakati nepakati.
Maitiro ekuvandudza mutero
Zviri pachena kuti kurapwa kwemitero yezvigadzirwa zvemari ndiko kuripo panguva ino uye hakugone kuchinjwa kusvika shanduko nyowani mumitemo, asi kuburikidza ne "madiki" madiki tinogona kuchinja maitiro aya, kunyangwe chete mune chaiwo zvigadzirwa uye kwete mukati ese ese, sezvauri kuona.
Mune mari yekudyara iwe unogona kuchengeta masheya kana kuendesa kune imwe mari (kunyangwe kubva kumaneja akasiyana) kumirira kuti mutero weizvi zvigadzirwa uderedzwe. Chaizvoizvo izvozvi, mamwe manzwi ane mukurumbira wehunyanzvi mukurumbira ari kubuda umo izvi kudonhedza mutero, iyo ingangosvika kusvika ku18%, sezvavakange vatangwa kare. Zvakanaka, kana mari yakaiswa mumari yekudyara yakachengetedzwa kusvika panguva iyoyo, vashandisi vanogona kuchengetedza 3% mumitero.
Nekuremekedza zvimwe zvigadzirwa, zvese zvakagadziriswa uye zvinoshanduka mari, zvingave zvakanyanya kuoma kuunza iyi zano kuzadzikise, kana zvisingaite nil. Chero zvazvingaitika, zvaizobatanidza kunyorera mari mune yepakati kana yakareba, pakati pemakore gumi nemaviri kusvika gumi nemaviri, tichimirira mutero wakamirirwa kwenguva refu kuti uuye. Izvozvowo zvakaitika mumabhengi ekuvimbisa manotsi kana zvimwe zvigadzirwa zvakafanana (kuvapa kondirakiti kwemakore akati wandei), nepo muzvikwereti chinangwa ichi chingaitwazve nekupa mari yedu kune iyo yakareba, kana chaizvo kana zororo remari rikaitika.
Zadzisa kudzoka kuburikidza nezvikamu uye izvo zvinonyanya kubatsira kubva pamutero wekutarisa kwevashandisi kupfuura mune mamwe emhando dzekudyara. Sezvo, kunyangwe ivo vari pasi peye 21% inorega mutero, kuregererwa kubva pamutero unosvika kumazana e1.500 euros pagore kunogadzirirwa kune ese madhiri kana migove mune purofiti inogamuchirwa mugore. Kunyangwe zvichipiwa kuti zvinotevera mamiriro ezvinhu zvikaitika: kana iwo masheya anowana mubairo akave akaitirwa mupotfolio kweinopfuura mwedzi miviri isati yaunganidzwa kana kana akaitwa kweinopfuura mwedzi miviri mushure mekuunganidzwa. Kune izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti parizvino mari dzeSpanish dzinogadzira gohwo remugovano we pakati pe5% ne8%, zvakatonyanya nemakambani ane rupo mune indekisi yemasheya.
Kuhaya chirongwa chepenjeni kunogadzirawo zvakakosha mutero. Chokwadi, mipiro kuzvigadzirwa izvi inopa kodzero yekudzikisira mutero weiyo Weyako WeMutero Mutero, ichibvumira varidzi vayo kunonoka mutero uye kuwana mutero kusevha. Yese mipiro inoitwa nemutora chikamu mukati megore inozodzikiswa kubva pamutero wemari, pamwe nemawmums akagadzwa nemutemo.
Yakakwira purofiti maakaundi
Mabhangi nemabhangi ekuchengetedza ari kuvhura mamwe marudzi emaakaunzi anopa mubairo wakakwira kune vatengi vavo, kunyangwe nekuda kwekudonha kwemitero, idzi kashoma zviitiko umo pfuura 2% uye, mune marongero mazhinji ekuvashambadza akarara mukupa purofiti yavo zvichibva pazvidimbu, kuitira kuti vape mubairo mari hombe dzakachengetwa
Zviratidzo zverudzi urwu rwechigadzirwa ndezvekuti hazviwanzo kusanganisira mari yekuchengetedza kana yehutariri uye inofambidzana nemamwe masevhisi emahara evanobata, akadai sekukweretesa zvakananga kana kutora makadhi mahara zvachose
Nekuda kwekudonha kwechangobva kuitika nekuenderera mberi kwemitero yezvibereko, mazhinji emasangano akasarudza kukanganwa nezvedanho rakatemwa uye nekupa iyi mhando yemakaunzi akanangidzirwa kuEuribor, nepo mune dzimwe nguva vakaabvisa ivo chaivo kubva kubhangi yavo yavakapihwa.
Kudonha kwemitengo yemitero mumwedzi ichangopfuura kwave kungokanganisa kukwezva kungave nerudzi rwechigadzirwa ichi, icho dzimwe nguva chakauya kuzopa varidzi vacho mareti anodzoka kunyangwe pamusoro pe4%, uye 6% mune kumwe kukwidziridzwa kunozivikanwa, nepo iyo nguva isingawanzo kuti ivo vapfuure 2%. Kune izvi, masangano anovashambadza anoashongedza iwo kuburikidza nhevedzano yemasevhisi anogona kushanda se kuda kubhadharisa. Kuwana makadhi emahara kana kukwanisa kuita zvikwereti zvakananga ndezvimwe zvezvikwereti izvi.
Chero zvazvingaitika, aya maakaunzi anopa kufarira kwakanyanya kupfuura echinyakare kutarisa maakaundi, ayo mune akanakisa kesi asingapfuure 1%. Iyo yekudzikira tsika mune yemitero inokanganisawo kupihwa kweizvi zvigadzirwa. Mamwe masangano akamira zvakananga kuva navo mumabhangi avo ekupa, nepo vamwe vanokanganwa nezve yakatarwa mitero uye vanosarudza kuirevera kuEuribor, iyo index iyo inopfuura makumi mapfumbamwe muzana embage inotaridzwa. Kune izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti parizvino mari dzeSpanish dzinogadzira gohwo remugovano we pakati pe5% ne8%, zvakatonyanya nemakambani ane rupo mune indekisi yemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Kuchengeta mutero nezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi
Maitiro ekuti utore mukana wekuisa wega kuvandudza zano rako pamabiko uye makongiresi
Zvakanakira bootstrapping yeCommerce